နိုဗဲလ်ဆုရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက် ၁၀ ချက်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ပြောင်းလဲနိုင်မလား | Ko Oo + Ma Thandar
« လွှတ်တော် နှစ်မျိုးနှင့် ၂၀၁၁ မြန်မာနိုင်ငံ
လှပစွာ သဘောထားကွဲကြပါစို့ »
နိုဗဲလ်ဆုရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက် ၁၀ ချက်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ပြောင်းလဲနိုင်မလား
ထက်အောင်	Thursday, 30 December 2010 13:46 – ဧရာဝတီ
နာမည်ကျော် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နိုဗဲလ်ဆုရှင် အိန္ဒိယလူမျိုး အမာတရာဆင်းက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အပြောင်းအလဲအတွက် နိုင်ငံတကာကနေ ထိထိ ရောက်ရောက် ကူညီနိုင်အောင် သူတို့ရဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေမှာ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်ကို အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမာတရာဆင်း ကိုယ်တိုင် ဘန်ကောက် အခြေစိုက် The Nation သတင်းစာမှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့က ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နိုဗဲလ်ဆုရှင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား အမာတရာဆင်း (ဓာတ်ပုံ – Top News)
“တလောက နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း ပထမဆုံး ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက သူတို့နဲ့ သူတို့ရဲ့အပေါင်းအပါ တွေ ဆက်လက် အာဏာဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်အောင် မရိုးမသား လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်” လို့ အမာတရာဆင်းက သူ့ရဲ့ဆောင်းပါး မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှာ စစ်တပ်က အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေမှာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ရယူခဲ့တာ၊ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်မှာ အင်အားကောင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေ မပါဝင်အောင် စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်တာ၊ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို ဖမ်းဆီးထားတာနဲ့ စစ်အစိုးရကို လူသိရှင်ကြား ဝေဖန်မှုတွေအပေါ် လုံးဝခွင့်မပြုတာတွေကို ဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အပြင် နိုဗဲလ်ဆုရှင်က “အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းက ဘာများ လုပ်နိုင်ပါသေးသလဲ” လို့ မေးခွန်း ထုတ်ပါတယ်။
တလောက ထိုင်းနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ရောက်လာတဲ့ အမာတရာဆင်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုရော အနောက်နိုင်ငံတွေကိုပါ သူတို့ရဲ့ ထိရောက်မှုမရှိတဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေနဲ့ မြန်မာ စစ်အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကို အမှန်တကယ်မြင်ချင်ရင် အောက်ပါအချက် ၁၀ ချက်ကို ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်း သူက တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် (CoI) –
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် (CoI) ဖွဲ့စည်းရေးဟာ စစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲကို မရိုးမသားကျင်းပခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း အလွန်အားကောင်းတဲ့ အခွင့်အလမ်းတခုအဖြစ် အမာတရာဆင်းက အလေးထားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
နိုဗဲလ်ဆုရှင်ရဲ့အမြင်ဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သဘောညီမျှနေပါတယ်။ မကြာသေးခင်က အယ်လ်ဂျာဇီးယား ရုပ်သံဌာနက ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ လန်ဒန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားများ၊ ပညာရှင်များနဲ့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ တယ်လီ ကွန်ဖရင့်မှာ CoI အပေါ် သူထောက်ခံကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
“အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရေးဆိုတဲ့ အယူအဆကို ထောက် ခံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ့် အချက်တခုက ကျမတို့ တောင်းဆိုနေတာက ကုလ သမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် တခုပါ။ တခြားသူတွေ တွေးထင်နေသလို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို တရားခုံရုံးတင်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
“ဒီလိုတောင်းဆိုတာဟာ တပ်မတော် အာဏာပိုင်တွေကို တိုက်ရိုက် တိုက်ခိုက်တာလို့ ကျမတို့ မယူဆပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ တပ် မတော်အာဏာပိုင်တွေကလည်း ဒါဟာ သူတိုိ့ကို တိုက်ခိုက်တာပဲလို့ မယူဆစေချင်ပါဘူး” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတချို့က CoI ကို လူသိရှင်ကြား ထောက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံ က ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံအတွင်း CoI ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စမဖြစ်အောင် တရုတ်တို့ဘက်က စည်းရုံးမှုတွေကို တက်တက်ကြွကြွလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဘက်က ကြည့်ရင်တော့ CoI ဟာ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးပဲပြောပြော၊ ကျူးလွန်သူတွေကို တရားခုံရုံး တင်ဖို့ပဲပြောပြော ဒီလုပ်ရပ်ဟာ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံတခုရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စကို ပြည်ပက ၀င်ရောက် စွက်ဖက်တယ်လို့ သေချာပေါက် ရှုမြင်ပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာပြည်သူလူထုကို ထိခိုက်နစ်နာစေမယ့် အ၀တ်အထည်တင်ပို့တဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးကို ကန့်သတ်တဲ့ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုမျိုးကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း အမာတရာဆင်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ပိတ်ဆို့မှုတွေအစား စစ်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံမှုတွေကို ပစ်မှတ်ထား အရေးယူပိတ်ဆို့ဖို့သာ သူက အကြံပြုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေက ပြည်သူတွေကို အမှန်တကယ်ပဲ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့သလားဆိုတာ ပြန်လည်သုံးသပ်ချင်ပါ တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်းရဲ့ယခင်သဘောထားကို သတိနဲ့ ဆက်လက် ကိုင်ဆွဲထားဆဲပါပဲ။အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတွေက ပြည်သူတွေကို ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ပါတယ်လို့ နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့လို၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့လို နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့ အစီရင်ခံစာတွေမှာ မတွေ့မိသေးဘူးလို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြော ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ နေထိုင်နေရစဉ် ကာလအတွင်း အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် စစ်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်တယ်လို့ သူက တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
လက်နက်ရောင်းဝယ်မှု ပိတ်ဆို့ရေး –
ပစ်မှတ်ထားအရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတွေထဲမှာ လက်နက်ရောင်းဝယ်မှု ပိတ်ဆို့ရေးကို ထိပ်ဆုံး ကထားရမယ်လို့ အမာတရာဆင်းက ပြောပါတယ်။
လောလောဆယ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပ သမဂ္ဂနဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံတို့က လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုကို ပိတ်ဆို့အရေးယူထားတာတွေဟာ ထိရောက်မှုမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ အတွင်းမှာ ရုရှား၊ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေက မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်လေယာဉ်တွေ၊ စစ်သင်္ဘောတွေ၊ တင့်ကားတွေနဲ့ အမြောက်ကြီးတွေကို ရောင်းချ ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတခုဟာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက ချမှတ်တဲ့ နိုင်ငံအားလုံး မဖြစ် မနေ လိုက်နာရမယ့် လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုပိတ်ဆို့ရေးဆုံးဖြတ်ချက်လိုမျိုး လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ လက်နက်ရောင်းဝယ်ရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်မကျအောင် ရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေက ပိတ်ဆို့ ထားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါဟာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ခက်ပါတယ်။
တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုတွေ၊ ကျောက်မျက်ရတနာတွေ၊ ကျွန်းသစ်၊ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေလို သဘာဝထုတ်ကုန် ပစ္စည်းအားလုံးဟာ စစ်အစိုးရကို ကြီးမားတဲ့ အကျိုးအမြတ် တွေ ရရှိနေစေတဲ့အတွက် ပစ်မှတ်ထား အရေးယူပိတ်ဆို့ဖို့ အမာတရာဆင်းက လိုလားပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂတို့က အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ယူနိုကယ်နဲ့ တိုတယ်တို့လို ရေနံကုမ္ပဏီ ကြီးတွေရဲ့ အငြင်းပွားစရာ မြန်မာနိုင်ငံက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတော့ မျက်နှာလွှဲထားတာကို နိုဗဲလ်ဆုရှင်က ဝေဖန်ပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အရေးယူပိတ်ဆို့မှု –
နောက်ထပ် ထိရောက်တဲ့ ပစ်မှတ်ထား အရေးယူပိတ်ဆို့မှုက မြန်မာနိုင်ငံကနေ ကြီးမားတဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းမှု ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူတားမြစ်နိုင်တယ်လို့ အမာတရာဆင်းက ပြောပါတယ်။ ဒီလိုကြီးမားတဲ့ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေကို စစ်အစိုးရနဲ့ သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကသာ လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီး သာမန် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်တာ မဟုတ်တဲ့ အတွက်ပါပဲ။
စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သူတို့နဲ့ နီးစပ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတွေရဲ့ ထိရောက်မှုရှိ မရှိကတော့ ရှင်းလင်းမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။
ခရီးသွားလာမှု တားမြစ်တဲ့ အရေးယူပိတ်ဆို့မှု –
စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များရဲ့ ခရီးသွားလာမှုကို ဆက်လက်ပိတ်ဆို့ အရေးယူဖို့ အမာတရာဆင်းက ထောက်ခံ ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ လက်ရှိ ခရီးသွားလာမှု ပိတ်ဆို့အရေး ယူတာတွေက စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကို တစုံတရာ အထီးကျန်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအရေးယူမှုမျိုးကို မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေက လိုက်ပါလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် အများကြီး ထိရောက် မှုရှိပါလိမ့်မယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေက လက်ရှိခရီးသွားမှု အရေးယူပိတ်ဆို့တာတွေဟာ စစ်အစိုးရကို တရားမ၀င် အစိုးရတရပ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရာ ရောက်ခဲ့ပေမယ့် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း ပေါ်ပေါက်လာမယ့် အရပ်သား အစိုးရအသစ်ကို အနောက်နိုင်ငံတွေက ဘယ်လိုဆက်ဆံကြမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမှု –
“မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေဟာ အနှေးနဲ့အမြန် ဆိုသလို ကျ ဆုံးပါလိမ့်မယ်” လို့ အမာတရာဆင်းက ယုံကြည်ပြီး “ရက်စက်တဲ့အစိုးရတွေကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ထောက်ခံ အားပေးခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းကြောင့် ဒီနေ့ခေတ် လက်တင်အမေရိကမှာ အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေး ၀ါဒ ပြင်းထန်နေသလိုမျိုး သူတို့ကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက သစ္စာဖောက်ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေဟာလည်း ရေရှည် ကိန်းအောင်းနေလိမ့်မယ်” လို့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
မဝေးတဲ့အနာဂတ်မှာ လက်တင်အမေရိကမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ အာရှမှာ ဖြစ်လာမလားဆိုတာ ကြည့်မြင်ဖို့ ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပေမယ့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံတွေနဲ့လည်း ဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလို မျှတတဲ့ ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ထားမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် အဲဒီနိုင်ငံတွေဟာလည်း နောက် တက်လာမယ့် အစိုးရသစ်ရယ်၊ မြန်မာပြည်သူတွေရယ်နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ဆက်လက်ရှိနေမှာပါ။
အနောက်နိုင်ငံမူဝါဒတွေရဲ့ အားနည်းချက် –
အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေကို ရေးဆွဲတဲ့ အခါမှာ ရှေ့နောက်မညီတာတွေကို အမာတရာဆင်းက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ “မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ရှုတ်ချ ဝေဖန်တဲ့နေရာမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ အပြောကတော့ လက်စောင်းထက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အာဏာစက် အတွင်းမှာ လုံးလုံးလျားလျား ရှိနေတဲ့ အရာတွေကိုတော့ သူတို့မလုပ်ကြဘူး” လို့ နိုဗဲလ်ဆုရှင်က ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အကျိုးအမြတ်ရနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုံးဝရုပ်သိမ်းဖို့ အမာတရာဆင်းက အနောက်နိုင်ငံတွေ ကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်အခြေစိုက် ယူနိုကယ်ရေနံကုမ္ပဏီနဲ့ ပြင်သစ်က တိုတယ်ရေနံကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ မြန်မာပြည်က ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို သူက တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းပြောဆိုတာ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
“ဒီလိုလုပ်ဆောင်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင် တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ထိုင်းတို့ကိုလည်း ဆွဲဆောင်ဖို့ ပိုခက်ခဲပါတယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့တဲ့ ခံစားမှုကို ဖယ်ရှားရေး –
အရေးအကြီးဆုံးက “မြန်မာပြည်သူတွေ ကြားထဲမှာ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ မျှော် လင့်ချက် ကင်းမဲ့တဲ့၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ ခံစားချက်တွေ အဆုံးသတ်သွားအောင် အားပေးရမယ်” လို့ အမာတရာဆင်းက အကြံ ပြုပါတယ်။
“ကျနော်တို့ သတိထားရမှာက တိုက်ပွဲက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုရဲ့ အစဖြစ်တယ်။ စစ်အစိုးရဆီက လိုက်လျောမှု အနည်းအကျဉ်းအတွက် မဟုတ်ဘူး” လို့ နိုဗဲလ်ဆုရှင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီရေးရဲ့ စံနမူနာဖြစ်သလို မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ မျှော် လင့်ချက်အဖြစ် ရှိနေပါတယ်။ သူလွတ်မြောက်လာတာကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ၀မ်းပန်းတသာကြိုဆိုကြ တဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူအုပ်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ၇ နှစ်ကျော်နေထိုင်ခဲ့ရပေမယ့် ပြည်သူ တွေကို လှုပ်နှိုးနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေကို ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိနေဆဲပဲဆိုတာ သက်သေပြသခဲ့တာပါပဲ။
ကျဆုံးရေးလမ်းမဟုတ်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှု –
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ထွက်ပေါက်ပေးဖို့ အမာတရာဆင်းက အကြံပြု ခဲ့ပါသေးတယ်။ သွေးထွက်သံယို လက်စားချေမှုကို သူက အားမပေးပါဘူး။ သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေကို လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ပေးတဲ့ မြင့်မြတ်မှုမျိုး လုပ်ဆောင်ဖို့ သူက အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလနှောင်းပိုင်းက The New York Times မဂ္ဂဇင်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်စားချေ တဲ့မူဝါဒကို သူမထောက်ခံဘူးလို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဟာဆိုရင် သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစရာ ခိုင်မာတဲ့အကြောင်း တစုံတရာရှိတယ်လို့ ကျမမထင်ပါဘူး။ ကျမတို့က သူတို့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဒီလိုလုပ်ဆောင်နေတာ မရှိပါဘူး။ ကျမအနေနဲ့ သူတို့ကို အဲဒီလိုဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒ မရှိတာ အသေအချာပါပဲ” လို့ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အပြောင်းအလဲအတွက် အဆိုပြုချက် ၁၀ ချက်အပေါ် အခြေခံပြီး နိုဗဲလ်ဆုရှင် အမာတရာဆင်းက “ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ရှင်းလင်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ သေချာပစ်မှတ်ထား အရေးယူတဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ နောက်ဆုတ်သွားအောင်၊ လူအများစု ထင်ထားတာထက် ပိုမိုလျင်မြန်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်ပေါက် လာနိုင်အောင် ကျနော်တို့ လုပ်နိုင်ပါတယ်” လို့ သူ့ဆောင်းပါးမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမာတရာဆင်း အကြံပြုတဲ့အတိုင်း ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းပြီး တာဝန်ယူတတ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တနိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ ပြောင်းလဲတာကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက အမှန်တကယ်မြင်တွေ့လိုရင် ၎င်းတို့ဘက်ကလည်း ပြတ်သားရှင်းလင်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိဖို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေပါတယ်။
ထက်အောင်၏ Sen’s Ten-point Proposal: Could it Change Burma? ကို ပြန်ဆိုသည်။
This entry was posted on December 30, 2010 at 1:18 pm and is filed under ဆောင်းပါး, ဖြန့်ဝေခြင်း.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.